Akwụkwọ - Akwụkwọ edemede | Akwụkwọ Akwụkwọ (Peeji nke 3)
Nchịkọta nkenke nke “History of a staircase” by Antonio Buero Vallejo
N'isiokwu nke taa, anyị na-ewetara nchịkọta dị mkpirikpi nke "History of a staircase" nke Antonio Buero Vallejo tinyere ụfọdụ nkebi ahịrịokwu ya kachasị mma.
Mee rutere ma ahịa mbipụta akwụkwọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ọkara gas. Ndị a bụ mmemme 5 ahọrọ na atụmatụ maka ọnwa a.
Aha nke rose na Agwala ndị bịara abịa. Ihe nkiri Igwe onyonyo
A na-agbasa nsụgharị abụọ a aha Aha nke Rose, nke Umberto Eco dere, na agwala ndị ọbịa okwu, nke Harlan Coben dere, na telivishọn.
Akwụkwọ akụkọ ọdịda anyanwụ ghọrọ fim ndị a ma ama
Ntụleghachi nke akwụkwọ akụkọ ọdịda anyanwụ nke ghọrọ ihe nkiri ndị ama ama nke ụdị ahụ, dị ka Centaurs nke ọzara ma ọ bụ Ihe ifufe gara.
Moby Dick bu ezigbo ihe. Melville na-abanye n'ime ọhụụ na ịbọ ọbọ na mgbagwoju anya nke mmekọrịta. Bịa, ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Ofbọchị akwụkwọ. Nhọrọ nke ahịrịokwu ama ama na akwụkwọ edemede
N'ime Daybọchị Akwukwọ Nsọ a, enwere obere nhọrọ onwe onye nke mpempe akwụkwọ a ma ama nke ụfọdụ ndị edemede anyị kachasị elu.
Akwụkwọ ndị a tụrụ aro ka ha nye n'ụbọchị Akwụkwọ
Chọpụta akwụkwọ ndị anyị na-akwado ịnye n'ụbọchị Akwụkwọ. N’ezie ị ga-ekwu eziokwu ma ọ bụrụ n’iburu n’uche ndụmọdụ anyị ga-ahapụrụ gị.
Edere SM El Barco de Vapor na Wide Angle Awards n'ụtụtụ a, nke Carlo Frabetti na Nando López meriri.
Vicente Espinel na akwụkwọ nke iri, ụfọdụ akụkọ ifo na eziokwu ụfọdụ
VicenteEspinel bụ ntụpọ dị mkpa na abụ uri Castilian. Spin ya nke iri bu ihe nketa nke ndi okwu Latin. Bịa ịmụtakwu banyere ya na ọrụ ya.
Nbili nke ikuku. Poet Anthology, nke Juan Ramón Torregrosa dere
La rosa de los vientos bụ otu n'ime akụkọ ọdịnala zuru oke kachasị mma na asụsụ Castilian. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ ahụ na onye bipụtara ya.
Arkady Renko usoro, Martin Cruz Smith si onye nyocha Russia
Arkady Renko bụ onye isi nyocha na usoro akwụkwọ kacha mara amara nke onye edemede America bụ Martin Cruz Smith. Nke a bụ nyocha gị.
Eziokwu banyere ikpe Harry Quebert
Eziokwu banyere Harry Quebert Affair bụ ihe ọchị na-atọ ụtọ. Joël Dicker wepụrụ ezigbo atụmatụ na nnukwu ntụgharị. Bịa, ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Esemokwu nke The Satanic Verses nke Salman Rushdie
Amaokwu Setan, otu n'ime akwụkwọ esemokwu kachasị n'akụkọ ihe mere eme n'oge a maka oke ojiji nke Islam. Bịa, gụọ banyere ọrụ ahụ na onye dere ya.
Akwụkwọ ụlọ maka oge ịnọ n'ụlọ
Houseslọ ndị ahụ bụ ndị na-akwado ọtụtụ akụkọ na mgbakwunye na ịtọ ha. Ndị a bụ ụfọdụ utu aha iji gụọ ma ọ bụ cheta n'oge ịnọ n'ụlọ.
Otu esi agu akwukwo karia kwa afo
E nwere ọtụtụ ndị, otu afọ, anaghị enwe ike ịgụ ihe karịrị otu akwụkwọ, na mgbe ụfọdụ ọ na-erughị. Ya mere, anyị na-atụ aro ihe ịma aka nke ịgụ.
Javier Marías, onye edemede nwere ọ penụ mara nma ma na-atụgharịkwa uche miri emi banyere ụwa. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na ọrụ ya.
Taa, m na-agwa María Oruña, onye na-enye anyị ajụjụ ọnụ a mgbe ọ tọhapụrụ akwụkwọ ọhụụ ya, Ọhịa nke Ifufe Anọ, ebe ọ na-agwa anyị ntakịrị banyere ihe niile.
Juan Muñoz Martín. Akwukwo akwukwo nke umuaka
Na Bookbọchị Akwụkwọ Childrenmụaka na nke Ndị Ntorobịa nke Mba Nile m na-enyocha ọrụ na ọnụ ọgụgụ nke Juan Muñoz Martín, otu ụdị nke oge a.
Akwụkwọ ndị Offreds
Akwụkwọ ndị a na-enye onyinye bụ ịgba akaebe maka etu talent na iru na mgbasa ozi mmekọrịta si arụpụta ihe. Bịa, ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Akwụkwọ na mpempe akwụkwọ. Akụkọ na ndị dere ụnyaahụ, taa na ruo mgbe ebighị ebi
Akwụkwọ ndị dị na shelf anyị niile nwere n'ụlọ ewerela ọnọdụ etiti oge a. Omuma di nkpa, akwukwo akwukwo na mkpokọta.
Jo Nesbø gbara afọ 60. Nyocha banyere akwụkwọ ọhụụ maka afọ a
Jo Nesbø gbara afọ 60 taa. Onye edemede Norwegian meghere afọ nke isii ya ma ebe a ka akwụkwọ ya ndị ọzọ ga - abịa: Blood in the Snow and Midnight Sun.
Agwaetiti dị n'okpuru oké osimiri site na Isabel Allende
Agwaetiti dị n’okpuru oke osimiri na-akọ maka ọgụ maka nnwere onwe Tete. Akwụkwọ ahụ na-ekpuchi afọ iri anọ nke ahụmịhe siri ike. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Ọgwụgwụ nke Ọnwụ, nke Cixin Liu dere
Ọgwụgwụ nke ọnwụ bụ nke atọ na nke Cixin Liu epic atọ nke atọ ahụ. Bịa, ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Akwụkwọ Dreyfus Case
Okwu Dreyfus bụ aha ọjọọ akụkọ ihe mere eme, ngosipụta nke mgbochi Semitism na Europe na ngwụsị XNUMXth na mmalite narị afọ nke XNUMX. Bịa ịmụtakwu banyere ya.
Ime ụlọ mechiri emechi. 6 ihe omimi nke ndi uwe ojii ichoputa
Taa enwere ihe omimi ndị uwe ojii 6 mechiri emechi, akụ na ụba nke ndị edemede nke ụdị dịka Agatha Christie ma ọ bụ John Dickson Carr ji.
Akwụkwọ nke Juan Gómez-Jurado
Akwụkwọ Juan Gómez na-ekpuchi ọtụtụ ụdị (akụkọ ntụrụndụ maka ndị okenye, usoro ntorobịa na ụmụaka). Bịa ịmụtakwu banyere onye edemede a na ọrụ ya.
Akwụkwọ Elvira Lindo
Akwụkwọ Elvira Lindo bụ akwụkwọ na akwụkwọ ụmụaka ụmụaka maka ụdị ha pụrụ iche. Bịa ịmụtakwu banyere ya na ọrụ ya.
Akwụkwọ Javier Castillo
Akwụkwọ Javier Castillo aghọwo ihe zuru ụwa ọnụ n'ihi atụmatụ ha na ntụgharị uche a na-atụghị anya ya. Bịa ịmụtakwu banyere onye edemede na ọrụ ya.
Ajụjụ ọnụ Pedro Feijoo, onye edemede nke Un fuego azul
Onye edemede Galician Pedro Feijoo na-enye m ajụjụ ọnụ a ebe ọ na-ekwu maka akwụkwọ ya, ndị ọkacha mmasị ya na mmetụta na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Agnes na ọ joyụ
Ines na Joy so na saga nke gbadoro ụkwụ na "mgba ebighebi maka inwere onwe" na mbuso agha Spain. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Juan Eslava Galán. Nyochaa nke akwụkwọ akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ ya
Juan Eslava Galán nwere ubochi omumu. M na-enyocha ụfọdụ aha nke nnukwu ọrụ nke onye edemede a site na Jaen nke ụdị akụkọ ihe mere eme ama ama nke ọma ma gụọ.
James Ellroy. Mad Dog gbara afọ 72. Nhọrọ ahịrịokwu
James Ellroy, Mad Dog sitere na akwụkwọ akụkọ mpụ America, gbara afọ 72 taa. Ya mere enwere otutu mmadu ...
Dọkịta Rural, nke Franz Kafka dere
Dọkịta ime obodo bụ ederede na-eche onye na-agụ ya ihu. Asụsụ ya doro anya nke na o doro anya ma ọ dị adị ma ọ bụ na ọ bụghị. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Ozi 5 maka March. Black akwụkwọ, akụkọ ihe mere eme, edemede ...
March na-abịa ma ndị a bụ akwụkwọ akụkọ 5 nke noir, akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ edemede ederede n'etiti aha ndị ọzọ Elvira Lindo ma ọ bụ Pere Cervantes bịanyere aka na ya.
Henry James. Afọ ncheta ọnwụ ya. 5 akwụkwọ akụkọ
Henry James nwụrụ dị ka ụbọchị taa na 1916 na London. Nyochaa 5 nke akwụkwọ akụkọ kacha anọchite anya ya nke etinyegoro na sinima.
Akwụkwọ José Saramago
Akwụkwọ José Saramago bụ ezigbo ihe ọmụma. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ nke onye edemede, onye nta akụkọ, ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye na-ede egwuregwu.
Akwụkwọ Miguel de Unamuno
Akwụkwọ Miguel de Unamuno na-anọchite anya nnukwu akụ ọgụgụ isi maka ụmụ mmadụ. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na ọrụ ya.
Banyere David Gistau, onye nta akụkọ na onye edemede. Akwụkwọ ha
Nyaahụ David Gistau, onye nta akụkọ na onye edemede nwere ọtụtụ akwụkwọ bipụtara, nwụrụ. Ntuziaka akwụkwọ akụkọ ugbu a na-enweghị njikọ na yana okwu pụrụ iche.
Aha Ifufe site n'aka Patrick Rothfuss
Aha ifufe na-eduga onye na-agụ ya ịkọwa akụkọ akụkọ Kvote, n'etiti echiche efu na ihe omimi. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Febụwarị. Akwụkwọ edemede 7 sitere na ndị edemede asaa
Anyị na-amalite na ọnwa Febụwarị na-akọwapụta akwụkwọ ọgụgụ edemede asaa ndị a sitere na ndị edemede 7 dị iche iche, mana yana akụkọ ọma maka ụtọ dị iche iche.
Fahrenheit 451 na-etinye gị na dystopian n'ọdịnihu ebe a na-eji ike site na mbibi akwụkwọ. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Saga nke ogologo oge Eva García Sáenz
Saga nke ogologo oge bụ ọrụ magburu onwe ya ma enigmatic bipụtara na nkeji abụọ. Bịa mụta maka atụmatụ mkpuchi ya na onye dere ya.
Ramón del Valle-Inclán, akụkọ ndụ na ọrụ
Ramón del Valle-Inclán bụ onye Spen na-ede egwuregwu, onye na-ede uri na ode akwụkwọ akwụkwọ akụkọ, ebe ewusiri ike nke akwụkwọ edemede Spanish narị afọ nke XNUMX. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na ọrụ ya.
Ọhịa gbara ọchịchịrị nke Liú Cíxīn
Ọchịchịrị Ọchịchịrị bụ akwụkwọ nke abụọ na atọ ahụ atọ mepụtara Cixin Liu. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye edemede.
Onye Martian, nke Andy Weir dere
Martian bụ egwuregwu dị egwu nke na-ewe gị iji gosipụta ihe nkiri nke nwoke gbapụrụ na Mars. Bịa ịmụtakwu banyere nkata ya na onye dere ya.
Anwụghị Anwụ Dracula. 7 ihu nke vampire nke Bram Stoker dere
Dracula, vramire na-adịghị anwụ anwụ nke Bram Stoker, nwere ọtụtụ nsụgharị na ihu na fim, nke kachasị ọhụrụ na usoro BBC na nso nso a. M na-enyocha ndị a 7.
Wilkie Collins. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Isi akwụkwọ
A mụrụ Wilkie Collins na London n’ụbọchị dị ka taa na 1824. Onye ọdee akwụkwọ Victoria nke gara nke ọma, ọ bụ onye mbute nke akwụkwọ nyocha. M na-agụgharị akwụkwọ ya ụfọdụ.
Ọgba aghara ị hapụrụ site n'aka Carlos Montero
Raquel bịarutere Novariz ka ọ gbanwee, ebe ahụ ka ọ matara na ya ga-anọchi onye nwụrụ n'ụzọ dị omimi. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Nsogbu ahu ato
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akpọga anyị n'eziokwu ebe anyị na-eme kọntaktị ndị ọbịa mbụ, mana nsonaazụ a na-atụghị anya ya. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
6 akwụkwọ ntorobịa zuru oke iji gụọ na mmiri
Onye na-eto eto nke na-agụ akwụkwọ mgbe niile na-amalite iche echiche, itinye uche ya na okwu ya. Bịa ma chọpụta 6 akwụkwọ ntorobịa emere maka gị.
Mgbe ị na-enye akwụkwọ, ị gaghị enyefe akwụkwọ
Mgbe ị na-enye akwụkwọ, ị gaghị enye naanị otu akwụkwọ. Ndị Magi na-abịa. Nye akwụkwọ. Ha kacha mma ma na-adịru mgbe ebighị ebi.
Akwụkwọ Roald Dahl
Ọrụ nke onye edemede Welsh a bụ ụtụ maka ichepụta ihe na ichetụ n'echiche, na atụmatụ ọhụrụ na-adọrọ adọrọ. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na akwụkwọ ya.
2020. editorfọdụ akwụkwọ akụkọ maka ọnwa Jenụwarị nke afọ ọhụrụ
Afọ 2020 ga-amalite. Afọ ọhụrụ nke ga-ejupụta ọzọ na akụkọ nchịkọta akụkọ nke ụdị niile. Ihe ndị a bụ ụfọdụ maka ọnwa mbụ nke ọnwa Jenụwarị.
N'etiti ndị kacha ere ahịa na 2019. Akwụkwọ akụkọ 6 na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma
Afọ 2019 agaala.Ọnụ ọgụgụ aka nke akwụkwọ kacha ere ahịa na ndepụta a agaghị enwe ọtụtụ ọdịiche n'oge a. 6 gosipụtara akụkọ ifo na akụkọ na-abụghị akụkọ ifo.
Icheta mmeghari ohuru nke ndi edemede
Nhọrọ na ihe ncheta nke ụfọdụ mmezi kachasị mma nke akwụkwọ ochie na televishọn, dị ka Fortunata na Jacinta ma ọ bụ Los pazos de Ulloa.
Christmas na akwụkwọ. 6 akụkọ dị iche iche maka ndị niile na-ege ntị
Christmas ọbụna n'akwụkwọ. Ndị a bụ aha akụkọ 6 maka ndị niile na - ege ntị, site na Agatha Christie ruo Astrid Lindgren.
Akwụkwọ Marta Robles
Ọrụ nke onye edemede a sitere na nchọpụta akụkọ ihe mere eme na akụkọ ifo na mkpokọta akwụkwọ akụkọ. Bịa mara ihe banyere ya.
Akwụkwọ kacha mma inye ekeresimesi a
Akwụkwọ ga-abụ ezigbo onyinye, nke a bụ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ kachasị mma na Spanish na afọ ndị na-adịbeghị anya. Bịa zute ha na ndị dere ha.
Ekeresimesi. 3 ochie: Grinch, nwa agbọghọ egwuregwu na Mr. Scrooge
Ekeresimesi dị ebe a ma mkpa ochie nke ụbọchị ndị a ga-alọghachi. Taa, a na m ekwu maka Grinch, obere nwa agbogho na Mazi Scrooge.
Akwụkwọ kachasị mma iji nye ekeresimesi a
Kedu onyinye ekeresimesi ka mma karịa inye ohere iji mụta ihe site na ndụ ndị mere akụkọ ihe mere eme? Bịa mụtakwuo banyere ihe odide ndị a.
Agha Star. Ike na-abịa na njedebe ma agụkwara ma chịkọta
A tọhapụrụ aha nke atọ nke atọ atọ nke Star Wars. A na-agụkwa ike nke soro anyị maka afọ 42.
Jane Austen. Okpomoku na akwukwo nke oru ya na ubochi 244
A mụrụ Jane Austen na Disemba 16, 1775, na Steventon. Ihe omuma nke Victorian Romanticism, nke a bu nchikota nke akwukwo na nkebi ahịrịokwu sitere na oru ya.
Akwụkwọ site n'aka Christian Gálvez
Chistian Gálvez bụ onye edemede pụrụ iche na ọnụ ọgụgụ Leonardo Da Vinci ma kwupụta ịhụnanya na Renaissance. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na ọrụ ya.
Ebe kachasị mma iji jikọta ịgụ na Madrid
Ọ bụrụ na ị hụrụ agụ akwụkwọ n'anya, ma ị nọ na Madrid, emere gị edemede a. Bịa lee ebe kachasị mma iji gụọ isi obodo Spanish.
4 akụkọ akụkọ ụmụaka na ihe nkiri maka ọnwa Disemba
Disemba na-abịa ma ụfọdụ akụkọ nchịkọta akụkọ na-atọ ụtọ na-apụta. Taa, m na-egosipụta 4 ndị a gosipụtara maka ndị na-eto eto na ndị na-agụ cinematographic.
Frank Jerby. Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ akụkọ African American
Frank Yerby bụ onye edemede ama ama ama ama n'Africa American akụkọ ihe mere eme. Ọ nwụrụ n'ụbọchị dika taa na Madrid. Ndị a bụ akwụkwọ ya kachasị mma.
Cenital, nke Emilio Bueso dere
Cenital bu ihe omuma ohuru nke di iche iche nke akowara dika "akwukwo sayensi-onodu ubochi". Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ a na onye dere ya.
Cinderella na ezi ya
Cinderella bu akuko gbara mkpuru akuko nke Brothers Brothers Grimm na Charles Perrault kpuchitere. Bịa ịmụtakwu banyere mmalite akụkọ ya na ọrụ n'onwe ya.
Lev Tolstoy. Nkebi ahịrịokwu 25 iji cheta ụbọchị ncheta ọnwụ ya
Lev Tolstoy nwụrụ na Nọvemba 20, 1910. Ndị a bụ ahịrịokwu 25 ahọpụtara site na ọrụ ya wee chee icheta ya na ụbọchị a.
A mụrụ Robert Louis Stevenson. 4 họọrọ poems
N'ụbọchị dị ka taa, na Edinburgh, a mụrụ Robert Louis Stevenson, nna ukwu nke akwụkwọ njem ahụ. Eji m uri ato o hotara n’ime oru ya dika abu.
Berlin Afọ iri atọ ka ọdịda mgbidi ahụ gasịrị. Akụkọ ndị ọzọ sitere na isi obodo German
Afọ 30 agafeela kemgbe ọdịda nke Mgbidi Berlin. Ndị a bụ akwụkwọ 6 nke akụkọ na oge dị iche iche na isi obodo German.
Ala nna nke Fernando Aramburu
Akwukwo edemede a bu ihe kachasi ike nke agha nke dakwasiri ndi Basque. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Mma site na Jo Nesbø. Harry Hole na hel nke onwe ya
Nke a bụ nyocha nke onwe m nke Cuchillo, akwụkwọ ọhụụ nke Jo Nesbø dere, nke iri na abụọ n'ime usoro site n'aka onye na-elekọta Harry Hole.
Nhọrọ kachasị mma nke akwụkwọ akụkọ ịhụnanya: Site na Austen ruo Esquivel
Nhọrọ anyị nke akwụkwọ akụkọ ịhụnanya gụnyere akụkọ ịhụnanya ndị ahụ niile kwesịrị ịgụ ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ.
Akwụkwọ Virginia Woolf
Akwụkwọ Virginia Woolf bụ ọrụ dị elu nke nnukwu akwụkwọ edepụtara nke gosipụtara oge. Bịa ịmụtakwu banyere onye dere ya na ọdịnaya ya.
Tempest bụ ihe nkiri nke mgbaghara na mgbapụta na mkpụrụedemede ejiri mara nke ọma kpara ọnụ. Bịa ịmụtakwu banyere nkata ya na onye dere ya.
6 nchịkọta akụkọ maka November a. Maka ihe niile.
Nọvemba na-abịa ma ọzọ enwere nnukwu mmemme site n'aka ndị mbipụta na ihu mgbasa ozi ekeresimesi. Ndị a bụ utu aha 6.
Special Jo Nesbø. Ya na onye kere Harry Hole na Madrid. Mmetụta
Jo Nesbø gara Madrid maka Getafe Negro na mụ na ya nọ. Nke a bụ akụkọ banyere akụkọ gbasara onwe m banyere nna Harry Harry.
Ndị Silmarillion bịara ịkọwa cosmogony nke Dinwenu nke Mgbaaka; ọ bụ akwụkwọ magburu onwe ya ma sie ike nghọta. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Otu n'ime ndị isi oke osimiri (na onye isi) nke osimiri
Ndị isi ụgbọ mmiri bụ ndị na-akwado ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ oge niile. Ndị a bụ ole na ole m na-echetakwa na fim.
Ifuru Ọjọọ, ọrụ magna nke Charles Baudelaire rụrụ
Las flores del mal bụ ihe atụ zuru oke nke mbibi French, ọkaibe kwesịrị ịnụ ụtọ na nyocha. Bịa ịmụtakwu banyere ya na onye dere ya.
Akụkọ na-enweghị njedebe
Akụkọ na-enweghị njedebe bụ akwụkwọ akụkọ na-abanye n’ime mkpa iche echiche na ọghọm nke mwute. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Na-emeghe Liber 2019. Na Beatriz Osés na ya Erik Vogler
Nyaahụ m nọ na mmemme mmeghe maka Liber 2019. Mụ na onye edemede bụ Beatriz Osés kwurịtara banyere usoro ntorobịa ya nke Erik Vogler na-eme.
Morris West. Afọ ncheta ọnwụ ya. Offọdụ n'ime ọrụ ya
Ọ bụ emume ncheta ọhụụ nke onye ode akwụkwọ Australia bụ Morris West. M na-egosipụta ụfọdụ n'ime ọrụ ya ndị a ma ama.
Akwụkwọ ntorobịa atọ na ntọala dị egwu ha
Ọganihu nke akwụkwọ ndị ntorobịa siri ike na afọ ndị na-adịbeghị anya, ya na atụmatụ ya na-adọrọ ndị na-eto eto aka. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ ndị a na ndị dere ha.
Onyunyo cypress na-agbatị elu, nke Miguel Delibes dere
Onyunyo cypress na-agbatị, na pen nke Miguel Delibes, ọ na-egosi anyị akụkọ mgba na mmeri. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye edemede.
Ozi 5 maka October. Akụkọ ndụ, nostalgia na… Harry Oghere
Ọktoba na ụbịa na-abịa ma soro ha ọtụtụ akụkọ akụkọ na-atọ ụtọ. M na-enyocha ndị a 5 bịanyere aka na nke JJ Benítez, D. Redondo ma ọ bụ J. Nesbø.
Irene Villa: akwụkwọ
Irene Villa bụ onye lanarịrị iyi ọha egwu, ihe ịrịba ama doro anya na, n'agbanyeghị ihe, ị nwere ike ịga n'ihu. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ ya na ndụ ya.
Oge ochie September III. Spanish oge gboo
Isiokwu nke atọ raara nye akwụkwọ ochie na nyochaa nke kpochapụwo Spanish ballads na ya kasị mara amara na ndị kasị ama ederede.
James Ellroy nzuzo. Nanị nzukọ ya na Madrid
Fridaybọchị Fraịdee gara aga mụ na James Ellroy nọ na nzukọ pụrụ iche, onye America ukwu na-ede akụkọ ifo na akụkọ ihe mere eme. Nke a bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, nke William Goldman dere
Dịka otu n'ime akwụkwọ kachasị mma, William Goldman's The Princess Bride na-ejikọ echiche efu, mmekọrịta ịhụnanya na ọchị n'otu akụkọ.
Oge ochie September II. Onye nchịkwa nke Hita na Akwụkwọ nke Ezi Lovehụnanya.
N'isiokwu nke abụọ a raara nye akwụkwọ Spanish oge ochie, echetara m Archpriest nke Hita na mpempe akwụkwọ nke Ezi Lovehụnanya.
Akwụkwọ 5 gbasara owuwe ihe ubi vaịn. N'ihi na Fans nke ezigbo mmanya na akwụkwọ
Owuwe ihe ubi abata na September. Akwụkwọ ndị a na-egbukwa ọtụtụ aha banyere ya, mmanya na ntọala ya niile. Ndị a bụ 5 n’ime ha.
Protmụ nwanyị na-akwado akwụkwọ akụkọ nke ala ojii n'oge a
M na-ele anya ụfọdụ n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma nke akwụkwọ akụkọ mpụ na-emepụta na nke ahụ bara uru ịchọpụta.
Baztán Trilogy bụ saga nke Dolores Redondo na-akọ banyere mpụ ndị ọzọ na Amaia Salazar ga-edozi. Bịa ịmụtakwu banyere ọrụ na onye dere ya.
Akwụkwọ 5 iji malite ụlọ akwụkwọ nke ọma (ma ọ bụ nke ọma)
Ị nwetere ya. Lọ akwụkwọ amalite ọzọ. Usoro ohuru na otutu ogugu n’iru. Ndị a bụ akwụkwọ 5 iji mee ka nloghachi dị mfe.
7 nchịkọta akụkọ maka Septemba. Biography, akpa ọchị, akwụkwọ akụkọ ...
Septemba na-abịa ma enwere akụkọ ederede na-atọ ụtọ site na nnukwu aha dịka Ellroy, King or Gabás. Anyị na-a lee anya na asaa ndị a.
Dolores Redondo: Akwụkwọ ndị a gosipụtara
Akwụkwọ Dolores Redondo emeela ka ụwa akwụkwọ wee na-ama jijiji, ọkachasị kemgbe ọ bịarutere sinima. Bịa ịmụtakwu banyere ndụ ya na ọrụ ya.
Francisco García Pavón. Narị afọ iri na Plinio na olu ndị dị na Ruidera
O ruo otu narị afọ kemgbe amụrụ Francisco García Pavón, onye ode akwụkwọ Tomellos kere Plinio. Nke a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke Voces en Ruidera.
Osisi ihe omuma, nke Pío Baroja dere. Ntụle dị mkpirikpi.
Osisi sayensị, nke Pío Baroja, bụ otu n'ime nnukwu ọrụ ya na usoro nke akwụkwọ mba. Taa, m na-eweta nkenke nyocha banyere ya.
Nkwụ na snow site Luz Gabás
Dị ka ihe dị iche ma dị iche, Palmeras en la Nieve nke Luz Gabás bụ akwụkwọ akụkọ ịhụnanya na Fernando Poo, na Spanish Guinea oge ochie.
Ihe ọkụkụ Bohemian, nke Ramón María del Valle-Inclán dere. Nyocha
Taa, m na-enyocha obere ọkụ Bohemian, kpochapụwo na nke mbụ nke Ramón María del Valle-Inclán, nke anyị niile gụrụ n'ezie.
Washington Irving, otu n'ime ndị America mara mma
Washington Irving bụ otu n'ime ndị edemede America ochie nke narị afọ nke iri na itoolu. Nke a bụ nyocha nke ọnụ ọgụgụ ya na ọrụ ya.
Hiroshima. 6 nke August. Akwụkwọ 5 icheta.
Hiroshima. August 6 na 5 akwụkwọ iji cheta ụbọchị na-adịghị mma dịka mmadụ ole na ole na akụkọ ntolite nke mmadụ. Agụ maka ntụgharị uche.
5 akụkọ na-agụ na August. Obere ihe.
August, ihe atụ nke ezumike. Ndị a bụ akụkọ nchịkọta akụkọ 5 na-apụta n'ọnwa a. Ọhụrụ site na Falcones ma ọ bụ usoro Millenium n'etiti ndị ọzọ.
Otu n'ime akụkọ. Goths, Erotic, Victoria, na ndị isi ojii
Taa bụ otu n'ime akụkọ dị iche iche: gothic, Victoria, nwa, erotic na Republic. Na site na ndị edemede dị iche iche site na oge dị iche iche.
Erich Von Däniken na akwụkwọ omimi ya ndị ọzọ
Onye edemede Switzerland bụ Erich Von Däniken bụ ọkachamara na akwụkwọ omimi ala ọzọ. Taa, m lere anya na ole na ole.
Ọnwa. Ọgụgụ 7 gbasara afọ iri ise ọ merisịrị mmeri.
Ọnwa. Ọgụgụ 7 gbasara afọ iri ise ọ merisịrị na July 50, 20. Ndị a bụ akụkọ asaa ahọpụtara n’akụkụ ya.
Nyocha nke agbamakwụkwọ ọbara site na Federico García Lorca
Agbamakwụkwọ ọbara, naanị otu egwuregwu nke Federico García Lorca mere ka ọ bụrụ akwụkwọ, na-adaba anyị na ọdachi zuru ụwa ọnụ nke jupụtara na akara nke onye dere ya.
Captain Frederick Marryat na 5 nke akwụkwọ njem ya
Frederick Marryat bụ onye isi ụgbọ mmiri ndị agha Royal Royal nke ndị agha Britain na narị afọ nke 5. Ọ bụkwa onye edemede nke akwụkwọ akụkọ. Ndị a bụ XNUMX n’ime ha.
2. El Cid laghachiri n'ogige. 5 akwụkwọ akụkọ banyere ọnụ ọgụgụ ya
N'isiokwu nke abụọ a raara nye ọnụ ọgụgụ El Cid, m na-enyocha aha 5 nke akwụkwọ akụkọ na akụkọ banyere ya site n'aka ndị edemede dị iche iche.
1. El Cid laghachiri ịma ụlọikwuu. Cantar ya na uri ndi ozo
El Cid laghachiri na mba ahụ ma ọ bụ ikekwe ọ dịbeghị ụdị ejiji. N’isiokwu izizi nke nyocha ya banyere onye ya, a na m echeta amaokwu ndi sitere na Cantar na abu ndi ozo ya
Akwụkwọ akụkọ 5 nke akwụkwọ ojii. Knox, Fitzek, Banalec, Bagstam na Harper
Julaị bidoro. Nyochaa akwụkwọ akụkọ 5 nke akwụkwọ akụkọ mpụ, ụdị dị mma maka okpomoku nke ụbọchị ndị a. Ha sitere na Knox, Fitzek, Banalec, Bågstam na Harper.
Robert The Bruce, Eze Scottish na oke akụkọ ya ịgụ.
N’agbata June 23 na 24, 1314, agha Bannockburn mere, nke ndi ...
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ 25 kacha mma Britain na oge niile?
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ 25 kacha mma Britain na oge niile? Ikekwe, mana maka uto ọ dịghị ihe edere. M na-ahụ ihe ha bụ.
Francis Drake. Akwụkwọ 6 banyere ama ama ama ama ama nke Bekee
Francis Drake. Akwụkwọ 6 banyere ama ama ama ama ama nke Bekee. Knowmara banyere ndụ ya na akụkọ ya ma chọọ ndị mmadụ niile.
Juan Sin Tierra. Gụ banyere nwanne Ricardo Corazón de León
Juan Sin Tierra bịanyere aka na ụbọchị dị ka taa na 1245 na Magna Carta, ihe ndabere nke nnwere onwe iwu na England. M na-enyocha ọgụgụ 5 banyere ọnụ ọgụgụ ya.
John Wayne. Akwụkwọ isii iji gụọ banyere akụkọ Hollywood
Ha mere ya baptizim Marion Michael Morrison, mana ụwa matara ya dịka John Wayne. Taa ka ọ nwụrụ na 1979. Ndị a bụ akwụkwọ isii iji cheta ya.
Akwụkwọ ọkọwa okwu Latin kachasị mma, yana akụrụngwa ndị ọzọ iji mụta asụsụ a
Latịn bụ asụsụ na-atọ ụtọ nke ukwuu, ịmụ ya na-enye echiche ọhụụ ma na-ewetara gị nso ịmara ndị oge ochie. Bịa ma chọpụta otu esi mụta ya.
Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia ... 8 ndị kachasị ere ahịa nke ọnwa ndị a
Allende, Espinosa, Asensi, Villar, Moccia, Monfort, Hess, Del Val ... Ha bụ aha nna nke ndị edemede 8 kacha ere ahịa na ọnwa ndị a.
Nwatakịrị nwanyị: nhọrọ iji bido ịgụ nwa gị n'ịgụ ihe
Agụ bụ otu n’ime ihe ọmụmụ mmụta zuru oke ma dị mkpa. Anyị na-agwa gị ihe kpatara ịmalite na Little Prince na-arụpụta ihe pụrụ iche.
Chuck Palahniuk si ọgụ Club
Kedu ihe bụ ọgụ ọgụ? Banye ma mara ihe niile gbasara akwụkwọ akụkọ a nke na-enyocha ụkpụrụ nke nwoke nke oge a dabere na ịkpọasị na ịzụ ahịa.
7 nchịkọta akụkọ akụkọ niile maka ọnwa nke ọnwa Juun
Ọhụrụ ọnwa na ozi ederede ole na ole amalitegoro maka oge ọkọchị. Ndị a bụ 7 ahọpụtara site na ụdị dị iche iche.
Miguel de Unamuno, onye edemede maka akụkọ ihe mere eme
Ọrụ Miguel de Unamuno bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n'ime akwụkwọ zuru oke na nnukwu akwụkwọ n'asụsụ Spanish. Bịa mara obere ihe banyere ya.
Akwụkwọ asaa nke amamihe
Akwụkwọ amamihe asaa Seneca na-enye ndị na-agụ ha ndụmọdụ dị ukwuu kwa ụbọchị. Bịa mara obere ihe banyere ha.
Neruda na elementrị Odes
The Elemental Odes bụ ihe atụ doro anya banyere otu esi ede ihe niile. Neruda na-enye ndị nkuzi klaasị n’uri. Bịa, mara ntakịrị ihe gbasara akwụkwọ a.
Ifo site na ohia site na Horacio Quiroga: akwukwo akwukwo Latin Latin
Akụkọ banyere oke ohia site n’aka Horacio Quiroga bụ ihe si na otu n’ime ọtụtụ ọdachi dakwasịrị onye dere ya. Bịa mara ntakịrị banyere ọrụ a.
Carrie, akuko banyere mmekpa ahu n’ulo akwukwo
Carrie bụ akụkọ nke Stephen King gosipụtara eziokwu banyere mmegbu nke ọtụtụ ndị na-eto eto nọ n'ụlọ akwụkwọ. Bịa gụọ ntakịrị ihe banyere ya.
Stephen King, nna ukwu ụjọ
N'ikwu okwu banyere Stephen King na-ekwu maka otu n'ime ndị edemede egwu kachasị egwu n'ụwa, ọrụ ya bụ akụkụ ofufe. Bịa ma gụọ ntakịrị ihe banyere ya.
A na-ahụta ihe na-enwu gbaa, nke Stanley Kubrick duziri, dị ka ihe nkiri nzuzo. Ma onye dere fim ahụ ahụghị ya n’anya. Gụọ ebe a ihe mere Eze anaghị amasị ya.
Nkpako na ajọ mbunobi nke Jane Austen dere
Anyị na-agwa gị nke ọma gbasara Nganga na ajọ mbunobi, otu n'ime ọrụ dị ukwuu nke akwụkwọ ụwa niile bịarutere na 1913 iji kọwaa ọrụ ụmụ nwanyị.
Eduard Punset anwụ. Akwụkwọ 6 si na sayensị kachasị ewu ewu
Taa Eduardo Punset, onye kacha nwee mmasị na sayensị na Spen, agafewo. Ndị a bụ nanị isii n'ime akwụkwọ o dere na ogologo ọrụ ya.
George RR Martin na-ekwu maka njedebe ya na Game nke n'ocheeze
Egwuregwu nke oche n'oche agwụla na telivishọn ya, mana onye okike ya, George RR Martin, na-ekwu maka njedebe ya ka ọ dị ọtụtụ karịa ma ka ede ya.
Ndi oti egwu, ndi ukwe na akwukwo banyere ha na ntughari uche ha
Ndị a bụ akwụkwọ 5 kachasị ọhụrụ na ndị egwu na ndị ọbụ abụ. Fọdụ bụ echiche ma ọ bụ akụkọ ndụ na ndị ọzọ na-asọpụrụ traje ha.
Literania na akwukwo akwukwo. Nhọpụta ederede dị mkpa na Madrid
Literania na akwukwo ngosi bu ihe edemede abuo di nkpa na Madrid maka okara nke abuo na onwa Mee. Anyị na-ele anya.
Ash nke Angela nke Frank McCourt dere
Epụtara na 1996 na nnukwu egwu, Frank McCourt's Ash na-atụgharị uche na ndụ nke onye edemede Irish.
Henry Rider Haggard. Echetara m onye edemede nke Mines of King Solomon
Na May 14, 1925, Sir Henry Rider Haggard, onye England na-ede akwụkwọ akụkọ, onye dere akwụkwọ ndị a ma ama dị ka Mineslọ Minista Solomon, nwụrụ na London.
Camilo José Cela. Iberibe akwụkwọ na nkebi ahịrịokwu maka ụbọchị ọmụmụ gị
Otu afọ ọzọ na-eme emume ncheta ọmụmụ nke Camilo José Cela. M na-ahọpụta ụfọdụ n’ime ederede ya na-echefu echefu.
Akwụkwọ akụkọ nke ọnwụ mara ọkwa nke Gabriel García Márquez
N'ịbụ onye akụkọ edemede akụkọ nke onye edemede dere, Akwụkwọ akụkọ Gabriel García Márquez nke Akụkọ banyere Ọnwụ E buru amụma bụ otu n'ime nnukwu ọrụ nke onye mmeri Colombia Nobel.
Akwụkwọ 5 nke ndị na-apụ apụ maka ndị na-akwado Ekwensu na njegharị ya
Ha ka dị na ejiji. Ekwensu na ndị na-alụso ya ọgụ: ndị na-achụpụ mmụọ ọjọọ. M na-enyocha aha 5 banyere ha, n'etiti ndị ọzọ, ndị ochie nke Blatty na Levin.
Penguin Random House na-agbasawanye otu mbipụta ya na Ediciones Salamandra
Penguin Random House zụrụ Ediciones Salamandra. Anyị na-enyocha ọrụ a nke na-eme ka otu Random House dị na ahịa mbipụta Spanish.
Akwụkwọ 5 na Mee 2, 1808 na echiche ya
Na Mee 2, nke na-echeta ngagharị iwe nke ndị Madrid megide ndị agha France na-achịkwa. Ndị a bụ akwụkwọ 5 gbasara ụbọchị ndị ahụ.
6 mmelite ederede aha-aha buru ibu maka May
Mee nwere ike ibido ma weputa otutu utu aha di nma maka onwa ozo. Maka ndị hụrụ akwụkwọ akụkọ ojii na akụkọ ihe mere eme, ndị a bụ 6 nke ndị a họọrọ.
Ide banyere ide. Ntughari akwukwo banyere ubochi akwukwo
N'ụbọchị akwụkwọ, edere m banyere ịde ihe ole na ole mgbe ndụ m gasịrị na-etinye okwu iji gwa onwe m na ịkọ akụkọ.
Caballo de Troya, nke JJ Benítez dere. Afọ 35 nke kpochapụwo saga
Trojan Horse saga, nke JJ Benítez dere, afọ iri atọ na ise. Akụkọ ihe mere eme, akụkọ sayensị, okwukwe ... Nyochaa otu ọgụgụ.
Ebe ngosi ihe mgbe ochie Prado gbara afọ 200. Akwụkwọ 7 gbasara ya.
Prado Museum na-agba afọ 2019 nke akụkọ ntolite na 200. Ahọrọ m akwụkwọ 7 maka ndị niile na - agụ akwụkwọ gbasara otu n’ime veranda nka kacha mma n’ụwa.
Beatriz Osés na Andrés Guerrero. SM Stegbọ mmiri Steamboat na Wide Angle Awards
Ndị dere akwụkwọ ozi ahụ, nke Beatriz Osés, na Blanco de tigre, nke Andrés Guerrero dere, ndị meriri na 2019 SM El Barco de Vapor na Gran Angular Awards.
Pavlichenko na Záitsev. Ndị Russia kacha egbu egbu. Ncheta
E bipụtara akụkọ ndụ Liudmila Pavlichenko, na ihe ncheta nke Vasili Záitsev, mmadụ abụọ n'ime ndị Russia ama ama WWII, bụ ndị ama ama.
Aha ojii: Carmen Mola, Dean Koontz na Stina Jackson
Aha abụọ dị mkpa na ọnọdụ ojii ugbu a laghachiri: Carmen Mola na Dean Koontz. Ihe ohuru ohuru nke Nordic debuts: Stina Jackson.
Daybọchị Akwụkwọ Childrenmụaka na nke Ndị Ntorobịa. 6 ogugu iji mee ememe
N’abalị abụọ nke Eprel, a na-eme Daybọchị Akwụkwọ Maka Childrenmụaka na Ntorobịa nke Mba Nile. Ndị a bụ ọgụgụ 2 maka ndị na-agụkarị n’ụlọ.
Ozi 6 maka Eprel. Aramburu, Vila-Matas, Márkaris, Sánchez ...
Eprel na-amalite, ọnwa nke akwụkwọ ahụ. Ndị a bụ akụkọ 6 editọ akụkọ sitere na aha dịka Aramburu, Vila-Matas, Márkaris ma ọ bụ Clara Sánchez.
Domingo Villar. Ihe ngosi na Madrid nke ụgbọ mmiri ikpeazụ. Ihe omuma ya
Domingo Villar gosipụtara akwụkwọ ọhụrụ ya, Oge Ikpeazụ, na Madrid mgbe ọ nọsịrị afọ iri. M na-enyocha ihe omume ya na ọrụ ya, trilogy nke Inspector Caldas.
2. Onye ọzọ nke ndị uwe ojii "ọjọọ" (ma ọ bụ ezigbo ezighi ezi) na ndị nyocha
Ugbu a ọ bụ oge ndị uwe ojii na "ndị ọjọọ" ahụ na ndị nyocha, ma ọ bụ, ka anyị kwuo, ndị na-anaghị erubere iwu isi, nwere ajọ omume dị iche iche ma bụrụkwa ihe nplaomi.
Lejarza, Gistau na Pérez-Reverte. Ihe kacha ọhụrụ banyere Spain
Akụkọ banyere Mikel Lejarza, David Gistau na Arturo Pérez-Reverte adịla n'okporo ámá. Aha nke akwụkwọ akụkọ kachasị ederede na akụkụ kachasị njọ nke Spain.
1. Otu n'ime ndị "uwe ojii" dị mma (ma ọ bụ ndị ziri ezi) na ndị nyocha
Edere edemede mbu maka ndi uwe ojii na ndi nyocha akwukwo banyere ihe ziri ezi dika ha di nma ma dikwa nma dika Servaz, Fabel, Bolitar, Betti, Munch na Caldas.
Women'sbọchị Women'smụ nwanyị Mba Internationalwa. 30 nkebi ahịrịokwu edemede banyere ha.
Otu afọ ọzọ na March 8, a na-eme Daybọchị Internationalmụ nwanyị Mba Nile gburugburu ụwa. Taa m na-anakọta ahịrịokwu edemede 30 gbasara ha.
5 ederede ederede dị iche iche maka ọnwa nke ọnwa Machị
March bụ dị n'akụkụ na m na-atụtụ 5 ọhụrụ themed editorials ka a tọhapụrụ ọzọ ọnwa. Maka uto ọ bụla.
Achingkụzi Akwụkwọ Akwụkwọ Taa. Ajụjụ ọnụ nke onye nkuzi.
M na-agwa Victor Irún, bụ prọfesọ n'otu ụlọ akwụkwọ dị na Madrid, ebe ọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ ESO na Baccalaureate banyere nkuzi akwụkwọ taa.
5 nke di na nwunye kacha mara amara na akwukwo
Inepo nọ ebe a ọzọ ma n’ụbọchị dị ka nke a, m lere anya n’ime mmadụ isii n’ime ndị di na nwunye ama ama na akwụkwọ.
Mariano José de Larra. Nkebi ahịrịokwu 30 maka ncheta gị.
Onye nnọchi anya Spanish Romanticism, Mariano José de Larra nwụrụ n'ụbọchị dị ka taa na 1837 na Madrid. Iri atọ na nkebi ahịrịokwu ya iji cheta ya.
Fran Zabaleta: Nlaghachi n'ime ime Spain na ụbọchị iri asatọ. Site na van.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na onye edemede were akpa akpa ya, obere ụgbọ wee gawa njem? I ma obodo gi nke oma? Nke ahụ…
Ndị Hávamál. Utu nke nkuzi nke Odin. Iwu 25
Taa, m na-ekwu ntakịrị banyere Hámavál, akwụkwọ nkuzi na amamihe nke chi Nordic par nke kacha mma, Odin. A compendium nke ndụmọdụ maka ezi Viking.
Eze Arthur. New snippets nke akụkọ ya na ụfọdụ ndị ọzọ
Eze Arthur bụ otu n'ime nnukwu akụkọ ifo nke akwụkwọ. A ka hụrụ mpempe akwụkwọ ọhụrụ nke akụkọ ntolite ya na narị afọ nke XNUMX.
Jack London. Emume ncheta afọ nke ọmụmụ ya na ụfọdụ nkebi ahịrịokwu ya
Anyị na-eme otu afọ ọmụmụ ọmụmụ Jack London, otu n'ime ndị edemede kachasị ewu ewu na akwụkwọ edemede ahụ. Eji m ufodu okwu ya cheta ya.
Biography na akwụkwọ kacha mma nke Megan Maxwell
Anyị na-emikpu onwe anyị na mbara igwe dị egwu nke akwụkwọ edemede site na akụkọ ndụ na akwụkwọ kacha mma nke Megan Maxwell.
Ndị edemede na-abanye na ngalaba ọha na 2019
Dị ka afọ ọ bụla, Jenụwarị 1 bụ oge ọrụ ụfọdụ ndị edemede na ndị okike n'ozuzu ha gafere na mpaghara ọha.
2019. Akwụkwọ ndị sitere n’ụdị nile na onye ọ bụla
Anyị amaliteworị 2019 na afọ edemede ọzọ na-ekwe nkwa na-echere anyị. A ga-enwe ọtụtụ aha e bipụtara ma anyị nwere olile anya ịgụ ha niile. Ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta.
Nhọrọ anyị nke akwụkwọ kacha mma nke 10 nke afọ 2018.
Anyị kwụsịrị afọ site na ịhọrọ akwụkwọ iri kacha mma nke 2018, nke a ga-akpọrịrị, akwụkwọ iri ...
Akwụkwọ Jungle. Omuma nke Ruyard Kipling nke na-alaghachi mgbe nile
Akwụkwọ Jungle. Omuma nke Ruyard Kipling na-alaghachi mgbe niile. Ugbu a na ụdị ọhụụ ọhụụ, agba ọchịchịrị maka sinima. Anyị na-enyocha ụfọdụ ndị ọzọ.
Atọ ojii ochie. Maka izu ohi, ndị na-ezi ozi na nke ọhịa.
Taa, m na-enyocha akwụkwọ ọgụgụ ojii atọ dị iche iche nke akwụkwọ: Perfect Robbery, The Postman Mgbe niile na-akpọ oku ugboro abụọ, na ọhịa Asphalt.
Arturo Pérez-Reverte. 67 kalịnda studs. N'ihu m
Arturo Pérez-Reverte gbara afọ 67 na Nọvemba. Otu n'ime ndị ọkacha mmasị m kachasị amasị m, n'isiokwu a, m na-eche echiche banyere ọrụ ya na ọnụ ọgụgụ ya.
Anyị na-agụ uri? Ee: Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ uri asaa ndị a
Anyị na-agụ uri? E-e, anyi n’eji mkpuru edemede asaa a nke ndi dere akwukwo n’oge dika Offreds, Búho, Brandon, Sastre, Benito, Arévalo na Cruz.
Ọnwụ. Agụ 6 na ụzọ 6 iji kọwa ma ghọta ya
Ahọrọ m ọgụgụ 6 ndị a nke kwụpụtara maka otu ha siri nyere m aka ịghọta uru ma ọ bụ ọhụụ nke ọnwụ n'ụfọdụ n'ụdị ya.
Ederede, akwụkwọ, akwụkwọ ... echiche 40 nke ndị edemede
Ọ bụ ọdịda. Oge a chọrọ ntụgharị uche. Ndị a bụ 40 nke ndị edemede dị iche iche na nka, ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ mkpa ide.
6 ọgụgụ dị iche iche nke ụmụaka na nke ndị ntorobịa maka ụbịa oyi
Nke a bụ ọgụgụ akwụkwọ 6 dị iche iche nke ụmụaka na nke ndị ntorobịa maka ụbọchị mgbụsị akwụkwọ ndị a. Ndị na-atọ ọchị dịka El Jabato, kamakwa aha dịka Judith Kerr.
Akwụkwọ akụkọ 5 maka ọnwa Nọvemba site na Gómez-Jurado, Jacobs, Stoker, Safier na Coben
Nọvemba malitere site na akwukwo akwukwo ndi edeputara dika Gómez-Jurado, Jacobs, Coben, Safier na Stoker. Iousdị dị iche iche na atụmanya dị mma.
Biography na akwụkwọ kacha mma nke Charles Dickens
Anyị na-abanye n'ime akụkọ ndụ na akwụkwọ kacha mma nke Charles Dickens iji chọpụta ihe omimi, ịda ogbenye na olileanya nke London London.
Eduardo Mendoza: Biography na akwụkwọ kacha mma
Anyị na-emikpu onwe anyị na akụkọ ndụ na akwụkwọ kacha mma nke Eduardo Mendoza, otu n'ime ndị edemede Spanish dị elu n'oge anyị.
Bọchị Ọbá akwụkwọ. Ajụjụ ọnụ nke onye nduzi nke Mario Vargas Llosa
N'ụbọchị Ọbá akwụkwọ, mụ na Ramona Serrano Posadas na-ekwu okwu, onye isi nke Varlọ Akwụkwọ Ọchịchị Mario Vargas Llosa, na La Solana (Ciudad Real).
Oscar Wilde. Mgbe amamiihe. Iberibe 3 nke ọrụ ya
Taa bu ncheta ohuru nke omumu Oscar Wilde, otu onye edemede ama ama ama na edemede. Enwere mpempe akwụkwọ 3 nke ọrụ ya.
Oge mgbụsị akwụkwọ nke Akwụkwọ ochie na nke ochie nke Madrid. Na-agagharị n'etiti ọla.
N’otu afọ ọzọ, a na-eme Ndozi Akwụkwọ Agba Ochie na Ochie nke Madrid. Ọ bụzi mbipụta nke iri atọ ma ọ dị na Paseo de Recoletos.
Vikings. Oge gboo na mgbe niile na ejiji. Fọdụ na-agụ
Vikings. Obodo ole na ole ama ama, na-akpali akpali akụkọ ifo na akụkọ ifo. Oge Ochie na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ nke na-apụ apụ n'ụzọ ọ bụla.
Akwụkwọ akụkọ 7 dị iche iche nke akwụkwọ akụkọ mpụ maka Ọktọba
N'ọnwa Ọktọba anyị na-anata akwụkwọ akụkọ mpụ ọhụrụ ọhụụ nke m na-enyocha n'okpuru. Aha dị ka Mosley, Perry, Katzenbach, Mikel Santiago ma ọ bụ Pérez Gellida.
Afọ 100 kemgbe njedebe nke Agha Worldwa Mbụ. Akwụkwọ 7 iji cheta ya.
Afọ nke njedebe nke Agha Warwa Mbụ ma ọ bụ Nnukwu Agha ahụ na-eru nso. Nke a bụ nhọrọ m gụrụ nke dị umeala n'obi na ọdachi ahụ.
Dan Brown Biography na Akwụkwọ kacha mma
Imikpu onwe gị na akụkọ ndụ Dan Brown na akwụkwọ kacha mma pụtara ime nke a na ụwa nzuzo nke akara, nkata na akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche.
Imikpu onwe gị na akụkọ ndụ Edgar Allan Poe na akwụkwọ kacha mma pụtara ime ya na mbara igwe gbara ọchịchịrị dị egwu juputara na akụkọ dị ukwuu.
Na-emikpu onwe gị na akụkọ ndụ na akwụkwọ ndị ka mma pụtara ime ya na eluigwe na ala nke onye edemede dị ka onye ọhụụ dịka ọ dị mkpa na akwụkwọ Spanish.
Walter Scott hapụrụ ụwa a wee bụrụ anwụ anwụ na Septemba 21, 1832. Taa, m na-enyocha mmegharị ihe nkiri kachasị mma nke ọrụ ya kacha mara amara.
Ngalaba Q nke Jussi Adler-Olsen dere. Usoro na nsụgharị ihe nkiri
Ngalaba Q nke Jussi Adler-Olsen dere. Usoro na nsụgharị ihe nkiri. Nkeji nkeji anọ na sinima nke usoro ojii ojii Nordic a tọhapụrụ. Njikwa 4.
Biography na akwụkwọ kacha mma nke Stephen King
Ihe ndekọ ndụ Stephen King na akwụkwọ kachasị mma na-emikpu anyị na ikuku pụrụ iche nke Eze nke ụjọ kpara n'ime afọ iri ise gara aga.
Nhọrọ nke Barack Obama
Nhọrọ a nke Barack Obama ịgụ maka ngwụcha oge ọkọchị gụnyere ụfọdụ aha kachasị mma n'Africa na ndị ọzọ na-akpali echiche.
DH Lawrence. Nwanyị Chatterley hụrụ n'anya na ahịrịokwu iri na ise.
O bu ohuru ncheta omumu DH Lawrence, onye edemede bekee bu Lady Chatterley's Lover. M na-enyocha ọrụ a na-akọwapụta ahịrịokwu 15.
Mermaids na The Gypsy Achọghị. Ebube ojii abụọ dị ukwuu.
Sirenas na La novia gitana bụ akwụkwọ akụkọ mpụ abụọ nwere amụma kachasị na ebe ahụ yana ọfụma izizi mbụ nke Joseph Knox na Carmen Mola.
Isabel Allende: Biography na akwụkwọ kacha mma
Isabel Allende abụghị naanị onye edemede kachasị ebi na Spanish, kama ọ bụ onye na-akọ akụkọ dị ka ọ dị iche.
Gabriel García Márquez: biography, ahịrịokwu na akwụkwọ
Anyị na-enyocha eluigwe na ala nke Colombian Nobel Prize in Literature site na biography na akwụkwọ nke Gabriel García Márquez
Septemba. Akwụkwọ edemede 6 nke ụdị dị iche iche
Septemba na-abịa ma anyị nwere akwụkwọ edemede ịnabata ọdịda. Ndị a bụ aha 6 maka ụdị ndị na-agụ akwụkwọ na isiokwu dị iche iche.
Akwụkwọ ndị a kachasị mma na Europe na-abanye n'ime akụkọ ntolite na mgbanwe mmekọrịta mmekọrịta nke kọntinent ochie site na akụkọ na-atọ ụtọ.
Ihe nkiri kacha mma dabere na akwụkwọ
Ihe nkiri ndị a kachasị mma dabere na akwụkwọ na-eme nhọrọ zuru oke maka oge okpomọkụ nke fim ... ma ọ bụ nnukwu ọgụgụ site na ọdọ mmiri.
Akwụkwọ kacha mma edoziri na Caribbean
Akwụkwọ ndị a kachasị mma edoziri na Caribbean sitere na Bob Marley's Jamaica ruo akụkọ akụkọ ịhụnanya nke Gabriel García Márquez.
Ebe na Spain na egosi na akwukwo
Ebe ndị a dị na Spain ndị na-apụta n'akwụkwọ na-akpọrọ anyị gaa La Mancha del Quijote ma ọ bụ ndagwurugwu Baztán ahụ dị omimi.
Akwụkwọ kacha mma ọdịnihu
Akwụkwọ ndị a kacha mma na-eme n'ọdịnihu na-ewetara anyị panorama nke dystopian nke a hụrụ site na echiche nke ndị edemede dị iche iche dịka Huxley ma ọ bụ Wells.
Akwụkwọ ndị nwere njedebe kacha mma
Akwụkwọ ndị a nwere njedebe kachasị mma na akụkọ ntolite na-akwado ike nke akụkọ ụfọdụ iji jide anyị n'usoro ikpeazụ ha.
Akwụkwọ kacha mma ndị Mexico nwere akwụkwọ a gosipụtara mmetụta nke mgbanwe mgbanwe Mexico ma ọ bụ ugbu a dị ka ezigbo anwansi.
Harry Potter ma ọ bụ Daenerys Targaryen bụ ụfọdụ n'ime ihe odide ndị agụnyere na sagas kacha mma nke akwụkwọ n'akụkọ ihe mere eme iji mikpuo onwe gị.
Gịnị bụ ọhụrụ si Jo Nesbø. N'oge mgbụsị akwụkwọ Onye nketa na… ga-alaghachi Harry Oghere
Jo Nesbø kwesiri ntụkwasị obi ka nọkwa na afọ a. N'ọnwa Ọktọba, Onye nketa ga-ere na July 2019 Harry Hole laghachi na akwụkwọ nke iri na abụọ ya.
Akwụkwọ kacha mma nke XNUMXst narị afọ
Immigrashọn, eziokwu nke Middle East ma ọ bụ American paranoia bụ ụfọdụ n'ime isiokwu ndị akwụkwọ kachasị mma nke XNUMXst narị afọ a kwuru.
Usoro kachasị mma dabere na akwụkwọ
Akụkọ banyere ụmụ nwanyị ma ọ bụ ọnya mepere emepe bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị a dabere na akwụkwọ ị na-agaghị echefu n'oge okpomọkụ a.
O siri ike ịgụ akwụkwọ
N’agbanyeghi na odide akwukwo ndi bu nnukwu akwukwo, akwukwo ndi a na agu ogugu anaghi adiri ndi nile na agu ya nma.
Akwụkwọ kacha mma iji gụọ ezumike a
Akwụkwọ ndị a kachasị mma iji gụọ ezumike a ghọrọ amụma na-enye ume ọhụrụ na-agagharị n’etiti akwụkwọ mpụ ma ọ bụ akwụkwọ njem.
6 akwụkwọ akụkọ. De Roa, Pellicer, Lara, Durham, Aurensanz na Molist
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ isii nke ndị edemede 6 dị ka Jorge Molist, Sebastián Roa ma ọ bụ Carlos Aurensanz, David A. Durham, Javier Pellicer na Emilio Lara.
Akwụkwọ nke Oké Osimiri, nke Morten A. Strøksnes dere. N'oge okpomọkụ shark.
Akwụkwọ nke oké osimiri, site n'aka onye edemede Norwegian Morten Strøksnes, bụ nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ kachasị ọhụrụ nke echiche na ọdịdị nke na-abịakwute anyị site na North.
Ọhụrụ site na Mendoza na Pérez-Reverte na-enwe agụụ maka mgbụsị akwụkwọ.
Eduardo Mendoza na Arturo Pérez-Reverte na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ọhụrụ maka ọdịda a. M na-aga n'ihu ile ha anya ma jiri ndidi chere ka okpomọkụ gafere.
Hụ gị n'ebe ahụ, site n'aka Pierre Lemaitre, na sinima. Nyocha m.
Taa, a tọhapụrụ ụdị ihe nkiri nke See You Up There, akwụkwọ akụkọ ahụ bụ Pierre Lemaitre, onye mmeri nke Goncourt 2013. Nke a bụ nyocha m.
Akwụkwọ kacha mma foto maka ndị okenye
Akwụkwọ ndị a kachasị mma maka ndị okenye weghachitere akụkọ ama ama ma nye anyị ndị ọhụụ nke onyinye anya ha na-eme ka echiche ahụ dịkwuo mma.
Julaị. 7 nchịkọta akụkọ maka ọnwa asaa nke afọ
Julaị abịarute, ọnwa asaa nke afọ. Nyochaa akụkọ akụkọ 7. Ihunanya, enyemaka onwe onye, ​​ihe ọchị, ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme. Akwụkwọ akụkọ maka ihe niile masịrị gị.
George Orwell. Afọ 115. Icheta Nnukwu Nwanna na Napoleon
George Orwell gaara agba afọ 115 taa. M na-echeta ya ọgụgụ na nkebi ahịrịokwu na iberibe site na ọrụ ya 1984 na Nnupụisi na ugbo.
Na-agba n'oge ọkọchị na akwụkwọ egwu egwu 7 mara mma na obere egwu
Iji nweta oge ọkọchị, utu aha ndị ụjọ site na Stoker, Poe ma ọ bụ Stevenson, ụfọdụ ụjọ na Roman Hispania na ngwakọta nke akụkọ sayensị na egwu atavistic.
Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ American
Akwụkwọ ndị kachasị mma nke akwụkwọ ndị America na-enyocha ịkpa ókè agbụrụ, ịgba ohu ma ọ bụ paranoia nke na-agagharị na akụkọ ihe mere eme nke obi West.
Russia. Omuma akwukwo ndi 7 bu ihe di nkpa. Ànyị agụwo ha?
A na-agba bọọlụ mba ụwa bọọlụ na Russia. Taa, a raara m edemede a nye 7 n'ime akwụkwọ edemede ya kacha anọchite anya ya.
Lorena Franco. Ajụjụ 11 maka onye edemede nke Ella Knows
Taa, m na Lorena Franco na-ekwu okwu, a na-ewere eze nwanyị ọhụrụ nke akpọrọ noir anụ ụlọ. Ọ zara ajụjụ 11 gbasara akwụkwọ ya na ọrụ ya.
Akwụkwọ 6 gbasara ụbọchị D-Day, ọdịda Normandy
Maka onye ọ bụla nwere mmasị na Agha IIwa nke Abụọ, June 6 akara na kalenda. Akwụkwọ isii a kwesịrị icheta ụbọchị ụbọchị ahụ.
Jack Taylor, onye aholicụrụma na onye edemede Irish nke Ken Bruen
Ana m enyocha usoro akwụkwọ akụkọ mpụ a nke onye edemede Irish bụ Bru Bruen banyere onye nyocha na antihero Jack Taylor. Aha 3 dị mkpa nke ụdị.
Francisco Narla. Ajụjụ 10 maka onye edemede nke Lain the bastard.
Francisco Narla bụ otu n'ime ndị na-akọ akụkọ akụkọ kachasị mma nke akụkọ ihe mere eme na o nwere akwụkwọ ọhụụ, Laín el bastardo. Zaa ajụjụ iri a.
Ndị edemede onwe ha II. Gabriel Romero de Ávila. Ajụjụ 10
N'ime ajụjụ 10 a Gabriel Romero de Ávila na-agwa anyị gbasara akwụkwọ ya na ndị dere ya, mmetụta ya, ọgụgụ ya, ọrụ ya na ahụmịhe ya.
José Luis Sampedro. Nyochaa nke ọrụ ya site na ahịrịokwu ya
Taa bụ ihe ncheta maka José Luis Sampedro na-enyocha ọrụ ya site na ahịrịokwu ya, ụfọdụ banyere usoro okike na ndị ọzọ gbasara ide ihe.
Akwụkwọ kachasị mma
N'etiti ụwa, ihe omimi nke onye na-eto eto ma ọ bụ eluigwe na ụwa Pratchett dabara na nhọrọ ndị na-esote nke akwụkwọ kacha mma kachasị mma.
Bọchị Ndị Nne. Akwụkwọ 6 maka ndị nne nke ọnọdụ niile
Taa bu ubochi ndi nne na abali ozo achoro m ikele unu. Ha niile nwere ike ime ihe niile ma gụọkwa. Ndị a bụ aha 6 maka ndị nne nwere mmasị niile.
Ivanhoe nke Walter Scott dere. Akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ akụkọ ahụ
Taa m nwetaghachi edemede m nke mahadum ọzọ na Ivanhoe, nke Walter Scott dere, wee jikọta agụụ abụọ dịka akwụkwọ na akụkọ ihe mere eme.
Aha ojii 5 maka ọnwa nke ise. Ugwu, Manzini, Mola, Silva na Swanson
Mee nwere ike ibido na n’etiti ndi ohuru ohuru ana m achoputa aha ise ndia. Site na Toni Hill, Carmen Mola, Lorenzo Silva, Peter Swanson na Antonio Manzini.
Akwụkwọ kacha mma gbasara India
Site na ihe ijuanya nke Ramayana ruo ugbu a ọnọdụ ụmụ nwanyị nọ na mba Eshia, akwụkwọ ndị a kachasị mma na India na-enyocha ihu dị iche iche nke otu n'ime mba kachasị iche n'ụwa.
Rafael Sabatini, afọ 143 nke nnukwu akwụkwọ akụkọ
Taa bụ afọ 143 kemgbe amụrụ Rafael Sabatini. Usọrọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya nwere ụfọdụ akụkọ ya na nsụgharị ha na ihuenyo.
Shakespeare's Macbeth. Mbido ndụ na ọbụbụenyi nke Banquo na Macbeth
Nke a bụ edemede m kọleji na Macbeth. Kpọmkwem, ọ bụ maka ọbụbụenyi dị n'etiti Macbeth na Banquo na otu esi agbanwe na ọrụ niile.
Dyingnwụ anwụ abụghị ihe na-ewute Inés Plana onye kachasị ere ahịa n'afọ.
Yingnwụ anwụ abụghị ihe na-afụ ụfụ kachasị bụ akwụkwọ mbụ nke onye edemede ọhụrụ, Inés Plana, ọ na-agakwa ịghọ otu n'ime ahịa kachasị elu n'afọ. Mmetụta dị otú ahụ na fim mbụ bụ ihe ọhụrụ.
Sergio Ramírez, onyinye ọhụrụ Cervantes. Atọ n'ime akwụkwọ ya.
Onye edemede Nicaraguan bụ Sergio Ramírez bụ onye mmeri afọ a nke onyinye kachasị elu maka mkpụrụedemede Spanish, Cervantes Prize. Anyị na-enyocha ọrụ gị.
Echiche 36 gbasara ndị edemede, edemede na akwụkwọ
Bookbọchị Akwụkwọ na-abịa. Gini bu akwukwo n’enweghi uche nke ndi dere ya? Lee 36 n'ime ha anyị nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ ghara. Ka anyị hụ ha.
Macbeth. Oké ọchịchọ, ike na ara ka Jo Nesbø si kwuo
Jo Nesbø na-ekpuchi Macbeth. Nrụrụ aka ndị uwe ojii, ụlọ ịgba chaa chaa, ọgwụ ọjọọ, ndị ọgba tum tum na ndị amoosu amoosu n'obodo mmiri ozuzo na nke gbara ọchịchịrị nke afọ 70
N'ehihie akwụkwọ na Jon Arretxe na Aranjuez. Ihe ngosi 19 gosipụtara
Na Eprel 4, onye edemede Basque Jon Arretxe nọ na Aranjuez. Ọ kọọrọ anyị ọtụtụ ihe banyere ndụ ya na ọrụ ya. Ndị a bụ ụfọdụ.
Akwụkwọ Laura Gallego: echiche efu na ntorobịa
Choputa akwukwo nile nke onye ode akwukwo a. N'etiti akwụkwọ Laura Gallego anyị na-ahụ heroines nwere ike, ụlọ elu dị omimi ma ọ bụ ndị mọnk na-achọ ịzọpụta ụwa.
Eprel, ọnwa nke akwụkwọ. Kedu ihe ha bụ, gịnị ka ha pụtara. 30 echiche
Eprel, ọnwa nke akwụkwọ. Iji mepee ụbọchị iri atọ a ka edere ede wee chịkọta usoro nkebi ahịrịokwu na echiche gbasara ha.
Site na García Márquez ruo na East East, anyị na-enyocha akwụkwọ kachasị mma na akụkọ ntolite nke ị ga-agụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ gị.
Ndị hụrụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ga-ahụ na akwụkwọ Matilde Asensi nke ihe omimi, izu nzuzo na nkata sitere n'akụkụ ụwa niile. .
Akụkọ ndị a kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme na-akwado ike nke akwụkwọ dị mkpirikpi sitere na ụfọdụ ndị edemede kachasị ama n'ụwa ụwa akwụkwọ ozi.
Father'sbọchị nna. Isi 6 maka nne na nna niile na gbasara ndị nne na nna
Otu afọ ọzọ anyị na-eme emume thisbọchị Nna nke Machị 19. Na otu afọ ọzọ m na-ahọrọ nhọrọ nke aha ndị okenye na ụmụaka, ndị nna na ọ bụghị ndị nna, ndị nne na ụmụaka gbasara ha.
Ides nke March. Akwụkwọ na akụkọ ndị ọzọ site na banyere Julius Caesar
Ha bụ Ides nke ọnwa Machị, dịka kalenda ndị Rome. Na ụbọchị dị ka taa nkata nke Brutus na ndị otu ndị ọzọ na Senate nke Rome kwụsịrị na ogbugbu nke Gaius Julius Caesar. M na-enyocha akwụkwọ ụfọdụ site na banyere ọnụ ọgụgụ a dị mkpa na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ.
Stephen Hawking agabiga. Akwụkwọ isii ndị astrophysicist a ma ama hapụrụ anyị
Anyị riri nri ụtụtụ taa site na ngafe nke ọpụrụiche physics bụ onye Britain bụ Stephen Hawking. Site na ebe a ka m na-echeta ya na 6 n'ime ọtụtụ akwụkwọ sayensị ọ bipụtara n'oge ọrụ ya niile dị ogologo.
Ahịrịokwu 17 nke ụmụ nwanyị na-ede akwụkwọ echefughi echefu maka ụbọchị ụmụ nwanyị a.
Machị 8, Ubọchi Women'smụ nwanyị n’uwa. Ana m eme ya site napụta ụfọdụ nkebi ahịrịokwu nke ụmụ nwanyị edemede nwanyị 17 ndị a na-agaghị echefu echefu.
6 ihu maka anwụghị anwụ Monte Cristo nke Alexander Dumas dere
Edmundo Dantés, Countless na-adịghị anwụ anwụ nke Monte Cristo onye kere Alexander Dumas, enweela ọtụtụ ihu na ihe nkiri ya na mmegharị telivishọn. Ndị a bụ 6 n’ime ha.
Akwụkwọ 7 meriri Oscar maka ihe nkiri kacha mma
Otu afọ ọzọ taa, anyị nwere agba ọhụụ na Oscars Awards na abalị pụrụ iche na sinima. Anyị nyochara akwụkwọ 7 nke emegharịrị na nnukwu ihuenyo ma merie Oscar maka fim kachasị mma.
7 akụkọ maka ọnwa nke March. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ...
Ọnwa ọhụrụ, ọhụụ ọhụrụ. March ga-eme nke kacha ọhụrụ site n’aka Vargas Llosa ma ọ bụ Pamuk, ya na Lackberg na Ferrante, ya na Izaguirre na Barneda. Na nnukwu Ibáñez. Obere ihe maka onye obula.
Victor Hugo. Afọ 216 ka a mụsịrị ya. Fọdụ nkebi ahịrịokwu na poems atọ
Taa, Febrụwarị 26, afọ 216 agafeela kemgbe a mụrụ Victor Hugo. Amuru ya na Besançon burukwa onye abu uta ...
Egwu. Mgbanwe telivishọn nke akwụkwọ Dan Simmons bịara
Ọ ga-abụ n’ọnwa Eprel. Netwọk AMC agbanweela Dan Simmons 'akụkọ akụkọ ama ama na akụkọ aghụghọ n'ime usoro telivishọn nke Ridley Scott mepụtara. Anyị na-ele anya.
Catbọchị Cat World. Akwụkwọ 7 gbasara akwụkwọ edemede.
N'ụbọchị Cat World, nke a na-eme taa, ana m enyocha aha ndị a ebe ụmụ kittens niile dị iche iche bụ ndị isi. Ihe nlere, mara mma, na-eyi egwu na isi iyi nke mmụọ nsọ.
Nkwado akwukwo di egwu: "Ncheta nke Idhún" nke Laura Gallego
Taa, n’isiokwu anyị n’edemede akwụkwọ edemede, anyị ewetara gị akwụkwọ nkwado dị oke egwu: “Memori nke Idhún” nke Laura Gallego dere.
Afọ Ọhụrụ China. Akwụkwọ 8 iji bịaruo mba ọwụwa anyanwụ na-adọrọ mmasị
A na-emezi Afọ Ọhụrụ ndị China ugbu a, afọ Nkịta. M na-enyocha akụkọ ọdịnala, akụkọ ihe mere eme na nke ojii banyere nnukwu obodo ọwụwa anyanwụ na-adọrọ mmasị.
Nchịkọta dị mkpirikpi nke akwụkwọ «Obodo na nkịta» nke Mario Vargas Llosa dere
N'isiokwu anyị taa, anyị na-ewetara gị mkpirikpi nchịkọta nke akwụkwọ "Obodo na nkịta" nke Mario Vargas Llosa dere. Yougụgo ya?
Adamsberg alaghachila. Mgbe recluse pụta, ọhụrụ si Fred Vargas
Jean-Baptiste Adamsberg, onye nlekọta pụrụ iche nke French nke Fred Vargas kere, laghachi na aha ọhụrụ nke usoro ahụ, Mgbe recluse ahụ pụta. Anyị na-echeta akụkọ ha.